Hosodoko : namorona ny « Lovakolo » i J A Ravelona | NewsMada
Hosodoko : namorona ny « Lovakolo » i J A Ravelona
Toy ny efa mikoriana ao anaty rany ny fanehoany fihetseham-po momba ny vakoka. Nipoitra avy ao amin’ny fianakaviana mpahay asa tanana rahteo i Jean Andrianaivo Ravelona… Teraka ny “Lovakolo”!
Hosodoko momba ny Rova sy ny vakoka. Anisan’ny lohahevitra tena nahafantarana an’i Jean Andrianaivo Ravelona. Nomeny anarana « Lovakolo » izay ataony araka ny faneho « Ay Fanahy ». Raha ny fanazavany momba ity teny noforoniny ity : « lova, harentsaina, kolontsaina nolovaina hatramin’ny razambe, koloina, arovana, sns, ny « Lovakolo » ».
Nomarihiny fa « tsy feno loatra na tsy mahalaza ny maha izy ny maha Malagasy ny hoe « lovantsaina » satria ny saina avy amin’ny foto-pisainana vahiny sy tandrefana. Ho azy ireo, ny saina no maha olona satria ry zareo, tsy mitempo amin’ny fo loatra. Ho an’ny Malagasy anefa, tsy ny ara-tsaina ihany no fototra sy niaingan’ny kolontsaina fa ny fanahy ao anaty ihany koa ». Nanao fampirantiana voalohany momba ny « Lovakolo » tao Paris i Jean Andrianaivo Ravelona, ny taona 2012. Nanasany an’i Tiavin’Andria sy Dede Valiha (mpanakanto sy mpamorona maneho ny aingam-panahiny momba ny Lovakolo) kosa ny fampirantiana notontosainy farany teo (29 jona – 2 jolay 2016), tao Paris ihany.
Taranaka mpahay asa tanana
Teraka avy amin’ny fianakaviana liana ara-panahy, mpanao asa tanana, ary saropiaro amin’ny “Lovakolo” i Jean Andrianaivo Ravelona. Mpanan-talenta sy mpanao asa tanana tany amin’ny taonjato faha-18 tany ho any ireo razambeny ary notehirizina tao Anatirova ny sanganasan’izy ireo. Nahay ny karazana asa tanam-behivavy toy ny rary, tenona, zaitra, sakafo, sns ny reniny. Ny raibeny izay mpanasitrana sy kristiana mafana fo, mpanao asa tanana tamin’izany andro izany.